Iindaba -Ukufumana inkxaso-mali esidlangalaleni kusinika ithuba elikhulu lokuqhubeka nokubonelela ngomxholo ophezulu. Nceda usixhase!
Iiadaptogens zitshayela umhlaba wezempilo, zikhula ngokukhawuleza njengenye yeendlela ezintsha eziqinisekisiweyo zokunyusa impilo yakho.
Ikwabizwa ngokuba yi-Ganoderma lucidum, i-reishi mushroom ixhaphake kakhulu kumayeza aseMpuma kwaye isetyenziswe "kunyango lwesintu ngaphezulu kweminyaka engama-2 000." Njengokuba ithandwa njengokuba la makhowa sele ekwilizwe lasentshona, eneneni anqabile, akhula "emazantsi emithi enqabileyo," ekhetha indawo ezahlukeneyo "ezishushu nezomileyo eAsia."
I-Ganoderma spore oyile capsule iqulethe i-triterpenoids Ganoderma acid, selenium, organic germanium, kunye nezinye izinto ezisebenzayo, kunye nezinye izinto ezinokunyibilika emanzini (i-polysaccharides) emva kwengqokelela ehlanganisiweyo. I-Glossy Ganoderma spore oyile lulwelo olubonakalayo olutyheli, eyona nto iphambili kukucwebezela kweGanoderma acid, i-asidi enamafutha engaginyiswanga, iGanoderma polysaccharide ebengezelayo. Ukutyhefa iiseli zethumba ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo ngokuphembelela okanye ngokukhuthaza i-phagocytosis yi-macrophages. Le mveliso inokuphucula ukukhuselwa komzimba, ukunciphisa ukukhutshwa kwemimoya, ukungafuni ukutya, ukugabha, ukulahleka kweenwele okubangelwa yi-chemotherapy, i-analgesic, anti-inflammatory, i-detoxification, ukukhusela isibindi, ukuphucula ukusebenza kwamalungu okutya kunye nokunciphisa i-cholesterol yegazi.
Kunye nokunye ukutya okusekwe kwizityalo, amakhowa ereishi "aneefayibha zokutya kunye neeminerali ezahlukeneyo, iivithamini kunye neeamino acid." Okwangoku, eyona nto ikhethekileyo kwezi fungi zincinci kukho umxholo ophakamileyo we "polysaccharides, peptides, kunye ne-triterpenoids," ezinokuthi zinxulunyaniswe neziphumo zazo ezilungileyo zempilo.
Izincedisi yeyona ndlela ilula yokuhamba xa uzama ukufumana zonke izondlo eziyimfuneko emzimbeni osempilweni! Ungazifaka kwisipaji sakho, uzifihle kwikhabhathi yamayeza, kwaye uhambe ngokulula. Esi sahluko sintsha seReishi Mushroom Supplement ayisiyiyo i-organic kuphela kodwa ikwayi-100 yeepesenti eqinisekisiweyo ye-vegan, iprojekthi engeyo-GMO eqinisekisiweyo, i-kosher eqinisekisiweyo, kunye ne-gluten-free. Lo mxube wereishi ujolise ekuxhaseni ukwaluphala okusempilweni ngokugcina amandla, impilo ende kunye nokuba sempilweni. Ibhotile yokubala engama-60 ixabisa i-17.09 yeedola.